Alex Iwobi oo sheegay inuu danaynayo in aan Arsene Wenger ka tegin Arsenal - BBC News Somali
Alex Iwobi oo sheegay inuu danaynayo in aan Arsene Wenger ka tegin Arsenal
Image caption Alex Iwobi wuxu Arsenal xili ciyaareedkan u saftay 35 goor waxaanu u dhaliyey afar gool
Weeraryahanka kooxda Arsenal, Alex Iwobi, ayaa sheegay in uu doonayo in Arsene Wenger sii ahaado tabobaraha kooxda waxaanu sheegay in dhaliisha loo soo jeediyey tobobaraha kooxda ee Faransiiska ahi in aanay "gar ahayn".
Wenger oo da'diisu haatan tahay 67 ayaa taageerayaasha Arsenal qaarkood dhaliileen ka dib markii kooxdu u dhaadhacday lambarka lixaad markii afar goor is xiga laga badiyey shanti ciyaarood ee ugu dambaysay ee kooxdu safatay.
Guul darradii ay kala kulmeen Bayern Munich oo celcelis ahaan kaga badisay 10-2 tartankii horyaalka Yurub ayaa sii kordhiyey cadaadiska lagu hayo Wenger, isna wuxu sheegay in uu "sida ugu dhakhsaha badan" go'aan uga gaadhi doono mustaqbalka inuu sii joogo Arsenal iyo in kale.
Iwobi oo 20 jir ah ayaa yidhi "sidaan qabo waa nin culus, waxaanan jeclahay inuu nala sii joogo".
Wenger qandaraaskiisu wuxu dhamaan lahaa dabayaaqada xili ciyaareedkan laakiin waxa loogu kordhiyey laba sanadood oo dhawaan ayaa loo cusboonaysiiyey.
Iwobi oo BBC-da la hadlay ayaa yidhi "had iyo goor wuu i caawiyaa ciyaartoy ahaanna xirfaddayda wuu dhisay" waxaanu intaa ku daray "Ilama aha in ay gar tahay sida qof kastaa u dhaliilayo. Runtii gar maaha weliba marka la eego wuxuu kooxda taray".